Su'aalaha La Weydiiyo - Higee Makiinado (Shanghai) Co., Ltd.
Qiimaheena waxaa la siiyaa macquul, taas oo ku xirnaan doonta dhammaan shuruudaha faahfaahsan iyo awoodda ay u baahan yihiin macaamiisha. Ka dib markii dhammaan faahfaahinta la xaqiijiyay waxaan siin doonaa soo jeedin ku habboon qiime.
Faahfaahin intee le'eg ayaa looga baahan yahay oraahda?
1.Awoodda mashiinka aad rabto.
2. Intee dhalo ama baakad weyn ayaad isticmaaleysaa?
3. Waa maxay mashiinka kale ee la xiriira?
4. Shuruudi kale oo kale?
Haa, waxaan ku siin karnaa dhammaan dukumintiyada dhoofinta ee ku saabsan nadiifintaada caadada ah, oo ay ku jiraan biilka xamuulka, qaansheegta, liiska wax lagu rakibo. Haddii aad wali ubaahantahay dukumiintiyo kale, fadlan nala soo socodsii kahor rarka.
Waxay kuxirantahay mashiinka, sida caadiga ah mashiinka shaqsiga, laga bilaabo 15-30 maalmood, khadka buuxa oo leh awood balaaran, waxaa laga yaabaa inuu ubaahanyahay 45-60 maalmood.
Caadi ahaan TT, 50% dhigaalka ka hor, 50% dheelitir ah in la bixiyo ka hor rarka.
Tayadu waa dhaqankeenna. Sida ku dhaqanka ah, waxaan bixinnaa dammaanad hal sano ah iyo adeeg nolol dheer ah.
Haa, waxaan isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh.
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Xamuulka badda sida caadiga ah waa la isticmaalaa. Qiimuhu wuxuu kuxiranyahay dekedda aad rabtid inaan alaabta u dirno. Haddii aad rabto inaad doorato xamuulka hawada mashiin yar ayaa sidoo kale la heli karaa si loo diyaariyo. Qalabka dayactirka, caadi ahaan waxaa loo isticmaali doonaa xawaare. Qiimaha waa la xaqiijin doonaa ka hor inta aan la soo dirin ama aan la soo gabagabeynin amarka.